Uncategorized | thepeopleoffreedom
Sanad Guuraddii 53kii Xornimada iyo Mideynta Soomaaliyeed
In Uncategorized on June 10, 2011 at 11:48 pm
Sida la wada ogsoon yahay waa 53 guuraddii calanka iyo qaranimadda soomaaliyeed, June 26, 1960kii xorriyadda gobolada waqooyi iyo maalinta July 1, 1960kii goboladda koonfur ahna maalinta israaca labada gobol, waxaa xusid mudan maalinta weyn oo taariikhi ah qiimo iyo qadarin ba ugu fadhido ummadda soomaalyeed, waa maalin duco iyo abaal ba muddan. Sidaasi darted waxaan halkaani hambalyo uga dirayaa dhamaan ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Runtii waa maalin weyn oo aan la ilaabi Karin oo ku weyn quluubta shacabka soomaaliyeed , waa maalintii calankeyna la taagay kii gumeysigana la siibay waa na maalintii gunnimadda aynu ka baxnay.
Waxaan halkaani hambalyo si gaar ahaan ugu soo jeedinayaa walaaleheyn reer Soomaaliland guusha ay gaareen oo ahayd in ay ka gudbeen Qabiil oo ay u gudbeen Qaran iyo Dimoqaraddi dhab ah , sidaasi dareteed waxaan leeyahay walaalaha koonfurta in ay kaga daydaan dadaalka dheeraaka ah ee ay muujiyeen shacabka reer Soomaaliland.
Hase yeeshee waxaa nasiib daro ah 53 sano ka dib soomaalidii xorta ahayd in ay u kala googodo dhowr qaybood oo qabiil ku dhisan , gobol walaba sameystay magac iyo madaxweyne u gaar ah ,taaso lagu marin habaabinaayo ujeeddooyinkii iyo himilooyinkii halgankii xisbigii SYL iyo muwaadaniinta soomaaliyeed ee gumeysi diidka ahaa , kala googo’aan iyo state yadda faraha badan ee manta soomaaliya u kala qaybsantay ay halis weyn ku tahay mustaqbalka midnimadda ummmadda soomaaliyeed, taasoo farxad gelineysa gumeysiga soo jireyka ah ee cadowga ummadda soomaaliyeed iyo kuwa u adeega gumeysiga.
Sanad Guuradii 70aad ee Halgankii xisbigii S.Y.L 15 May 1943
In Uncategorized on June 2, 2011 at 10:43 pm
hadba Kiina Taagdaran Taageera Waligiin Waxaa ii faraxad ah in marka hore aan hambalyo iyo boogaadin ba halkaani uga dirayaa dhamaan ummadda soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan, waa sannad guuradii 68aad ee ka soo wareegta xisbigii gobanima doonka ahaa ee S.Y. L 15 May 1943, Waxaan xusid mudan oo aan mar na la ilaabi Karin in dadweyne fara badan u soo halgamay oo naftoodda qaaliga ah u soo huray xornimadda oo aan maannta haysano iyo calanka sharafta leh oo muujinayaa haybadda iyo sharafta Qaranimada dalka iyo dadka soomaaliyeed, waxaa xusid mudan Halgame Allaha u naxariistee Xasan Cabdi Camalow (Xasan Giyaajo) .Wuxuu ku biiray ururkii SYL sannadkii 1943 oo ah markii dhidhibadda loo dhigay.
Magaca Giyaajo wuxuu ugu baxday asaga oo wadi jiray gari barafka loogu qaado oo lagu geeyo guryaha iyo maqaayadaha Talyaaniga. Habeenkii wuxuu gariga shaqada ku qaadi jiray xubnaha ka tirsan SYL si ay shirarkooda qarsoodi uga qabsadaan bacdama aan habeenkii loo ogolaan jiriin inay dadku shiraan.
Xaaji Xasan wuxuu ka mid ahaa halgamaaasha SYL waxaan ilaahay ugu baryeenaa inuu u naxriisto inta ruux ee ku shahiiday oo naftoodda u soo huray xornimadda aynu maanta haysano, inta nool na waxaanu Eebbe ugu rajayneynaa in ay ku noolaadaan bash bash iyo barwaaqo, waxaana ilaahaya ka baryeenaa in ummadda soomaaliyeed quluubtooddii isku soo dumo oo dhibatadda ku habsatay Eebbe ka qaado, si loo gaaro midnimo iyo horumar. Read the rest of this entry »
Dhallinyaraddu Waa Badbaaddiyaha Qaranka Qalinka iyo Tariikhda
In Uncategorized on June 2, 2011 at 10:32 pm
Qalinka, Tariikhda iyo Dhaqanka Sida la wada ogsoon yahay dhallinayaradda waa tiirka ugu muhimsan ee bulshadda, isla markaasi na dhallinyaraddu waa mustaqbalkii dalka , waa wax soo saarkii dalka, waa laf dhabarka Bulshada iyo waa lugahii uu dalka ku socon lahaa. Intaasoo muhimad ah ayay dalka u leeyihiin sidaasi darteed waxaa dhallinyaradda looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan dhismaha dalka iyo dib u soo celiyaan nabadgalyadii dalka iyo in ay ciidooda ka difaacaan cadow kasta ee ku soo xad gudbo, waa waajib muqadas ah ee ka saaran dhallinyaradda in ay dalkooda iyo dadkooda ba wax u qabtaan.
Hadda ba waxaa is weydiin muddan dhallinyaraddii shalay naftoodda iyo maalkoodda u huray difaaca dalkoodda iyo kuwa maanta muddada 21ka sanadood weli ku dhex jira dagaalka sokeeye oo weli xal u la’ yihiin in ay dib ugu soo ceshadaan Qaranimaddii iyo sharaftii u dalka lahaan jiray.
Haddaba farqiga u dhaxeyn kara dhallinyaaraddii shalay iyo kuwa maanta maxay tahay? : runtii farqiga u dhaxeyn kara wuxuu noqono karaa kuwii shalay waxay guushaasi faraha badan ay ku gaareen Daacanimo, Midnimo iyo Waddan Jaceel, haddii dhallinyaradda maanta laga helo waddaniyad iyo in dalka daaca loo noqdo waxaa dhab in ay dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ka samata bixin karaa dhibaatadda maanta haysta.
Dhallinyaraddii hore oo ku guuleystay in ay salka u dhigaan xisbi gobanimo doon ah oo la magac baxay SYL oo dagaal adag la galay gumeysiga una diiday in ay dalka si joogaan, kuwaa soo u suurta gashay in ay maalin cad ka bixiyaan gumeysigii dalkeena muddada 70ka sanadood iyo in ka badan xaraan ku haystay . Read the rest of this entry »
“NON PAPER” TO END THE SOMALI TRANSITIONNational Economist And Political Analyst
R/WASAARE GAAS OO DALBADAY $10-BILLIONNational Economist And Political Analyst
MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA IYO RA’IISAL WASAARAHA BRITAIN
HE WAS MURDERED ON 9 JULY 1989 IN MOGADISHU, SOMALIA.HE WAS MURDERED ON 9 JULY 1989 IN MOGADISHU, SOMALIA.